Vavaka amin'ny alina mba hahombiazana amin'ny maha mpitandrina | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka amin'ny alina mba hahombiazana amin'ny maha mpitandrina
Vavaka amin'ny alina mba hahombiazana amin'ny maha mpitandrina
2 Timoty 4: 18:
18 Ary ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra, ary hiaro ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra: ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen.
Ny pasitera tsirairay dia lasibatry ny demonia hery ara-panahy, tandindomin-doza hatrany amin'ny vavahadin'ny afobe ny asan'ny minisitera. Mba hahombiazana eo amin'ny asa fanompoana dia tsy maintsy omena vavaka matotra sy mitohy ianao. Tsy maintsy pasitera ianao izay mivavaka ao anatiny sy amin'ny vanim-potoana. Tsy misy zavatra manohintohina ny devoly sahala amin'ny fiangonana. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia fitaovam-piadiana farany andriamanitra mba hampiala ny helo ary ny pasitera dia andriamanitra fanovana Andriamanitra. Androany isika dia hanao vavaka amin'ny alina mba hahombiazana amin'ny maha mpitandrina. rehetra mpitandrina izay tsy maintsy mahomby amin'ny asa fanompoana dia tsy maintsy omena amin'ny vavaka amin'ny mamatonalina.
Hitokona foana ny fahavalo rehefa matory ny lehilahy, tsy afaka matory amin'ny maha pastera anao ianao ary manantena ny hitomboan'ny fiangonanao. Mpitandrina maro no tsy nahomby tamin'ny fiantsoana azy noho ny hakamoany amin'ny raharaha ara-panahy. Zavatra lehibe roa no hahombiazanao amin'ny asa fanompoana, dia ireto: Ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Amin'ity toerana roa ity dia tsy azo sakanana ianao. Androany dia hivavaka amin'ny fanoherana ireo hery miady amin'ny pasitera isika. Ity hery ity dia avy amin'ny alàlan'ny maso ivoho olombelona ary koa ny hery ara-panahy. Misy fiangonana sasany ankehitriny, na inona na inona toritenin'ny pastera dia tsy misy olona manome ny fony ho an'i Kristy. Ary koa ny fiangonana misy azy ireo dia tsy mitombo, isan-taona dia mbola mitovy ihany na ratsy indrindra. Ny devoly koa dia nahasosotra ny pasitera marobe tamin'ny fitarihana azy ireo hanota, ny fahotana amin'ny fijejojejoana, ny fanitsakitsaham-bady, ny fialonana, ny fahatezerana, ny diabolisma sns.
Raha mahita ny zava-misy eo ambony ianao dia tsy maintsy miakatra sy mandoa vola ady ara-panahy. Araraoty ny ora amin'ny alina, ampidiro amin'ny vavaka anio alina ary jereo Andriamanitra manova ny fitantaranao. Raiso am-pitandremana tsara ireo vavaka amin'ny alina ity, ampio amin'ny fonao rehetra io vavaka io ary mijereva maneho ny tenany amin'ny Tompo sy ny asanao ny Tompo.
Ity vavaka ity dia henjana manokana ho an'ireo pasitera izay mila mahita ny tanan'Andriamanitra mahery amin'ny fiainany. Mpitandrina izay miady amin'ny ministera ary te hahita fahombiazana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny asa fanompoana. Mivavaka aho fa rehefa manohy ny vavaka amin'ny alina ianao mba ho fahombiazana amin'ny maha mpitandrina androany dia hahita ny tanan'Andriamanitra amin'ny ministeranao amin'ny anaran'i Jesosy.
1. Misaora an'Andriamanitra noho ny tombontsoan'ny fiantsoanao.
2. Misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany fanafahana amin'ny karazana fanandevozana rehetra.
3. Mianara amin'ny fahotanao sy ireo razanao, indrindra ireo fahotana ireo mifandray amin'ny fahefana ratsy.
4. Mangataha famelan-keloka amin'ny Tompo.
5. Manarona ny ran'i Jesosy aho.
6. Ianao no manam-pahefana amin'ny ràn'i Jesosy, mampisaraka ahy amin'ny fahotan'ny razako.
7. Ràn'i Jesosy, esory ny marika tsy mikorontana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako.
8. Tompo ô, manaova fo madio amiko amin'ny herinao.
9. Tompo ô, manavao fanahy tsara ato anatiko.
10. Tompo ô, ampianaro aho ho faty ho an'ny tenanao.
11. Tompo ô, arotsaho ny afo nataoko.
12. Tompo ô, hosory aho hivavaka tsy hitsahatra.
13. Tompo ô, aoreno aho ho olona masina aminao.
14. Tompo ô, ampodio ny masoko sy ny sofiko ara-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Tompo ô, avelao hiankina amiko ny fanosorana.
16. Tompo ô, manaova ny herin'ny fifehezan-tena sy ny fahalemem-panahy.
17. Tompo ô, avelao ny fanosoran'ny Fanahy Masina hanapaka ny ziogan'ny fiodinan'ny fiainako rehetra.
18. Fanahy Masina, fehezo ny fahafahako mamolavola ny teniko, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Fanahy Masina, mba mifofofohy aho ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. afo ny Fanahy Masina, manala ahy ho voninahitr'Andriamanitra.
21. Isaky ny fikomiana rehetra, mandosira amin'ny foko, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Ny fahazotoana ara-panahy rehetra amin'ny fiainako dia mahazo fanadiovana amin'ny ran'i Jesosy.
23. Ianao ilay borosy raha ny Tompo, manosika ny loto rehetra amin'ny fantsom-panahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
24. Ny sodina ara-panahy rehetra mahazo aina eo amin'ny fiainako, mandray ny fahamaotinana, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny hery rehetra, mihinana ny fantsom-panahiko, natsatsika tamin'ny anaran'i Jesosy.
26. Mandà izay fanoloran-tena ratsy napetraka amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
27. Tapaka ny didy sy fanendrena ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Miala aho ary manafaka ny tenako amin'ny fanoloran-tena ratsy napetraka amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Ny demony rehetra, miaraka amin'ny fanoloran-tena ratsy, dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
30. Nialako tamin'ny fanandevozana nolovaina aho, tamin'ny anaran'i Jesosy
31. Nofoako ny fanekena ratsy rehetra nolovaina, tamin'ny anaran'i Jesosy.
32. Izaho dia manafoana ny ozona ratsy rehetra nolovaina, amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Ny matanjaka rehetra, mifatotra amin'ny fiainako, dia nalemy, amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Hanafoana ny vokatry ny anarana ratsy eo an-toerana aho, mifamatotra amin'ny oloko, amin'ny anaran'i Jesosy.
35 Fatorako ny fahefana rehetra sy ny herin'ny maizina izay miasa ao anaty ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Mamatotra ny hery rehetra aho, misintona izay rehetra ao amin'ny vatako mankany amin'ny ratsy amin'ny alàlan'ny angovo azo avy amin'ny masoandro, ny volana ary ny kintana, amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Mamatotra ny hery rehetra aho, misintona izay rehetra ao amin'ny vatako mankany amin'ny ratsy amin'ny alàlan'ny angovo alaina amin'ny planeta, antokon-kintana ary ny tany, amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Mamatotra ny hery rehetra aho, misintona izay rehetra ao amin'ny vatako mankany amin'ny ratsy, amin'ny alàlan'ny angovo alaina amin'ny herin'ny rivotra, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Mandrara ny fifindrana fanahy amin'ny fiainako amin'ny namanao sy naman'ny fianakavianao, amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Ny alitarany rehetra, manaratsy ny hoaviko masina, hofoanana amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Ho ringana daholo ny rojo vy rehetra amin'ny fananana ody ao amin'ny fianakaviako, amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Ny fambolena ratsy rehetra eto amin'ny fiainako: mandehana mitondrana amin'ny fakany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy!
43. (apetraho eo an-dohanao ny tananao iray, ary ny iray amin'ny kibonao na foibonao, ary atombohy hivavaka toy izao): afo ny Fanahy Masina, mandoro avy eny an-tampon'ny lohako ka hatrany an-tongotro. Atombohy ny milaza ireo taova rehetra ao amin'ny vatanao; ny voa, ny atinao, ny tsinaina, sns ... Tsy tokony hihazakazaka ianao amin'ity haavo ity, satria ho tonga tokoa ny afo ary mety hahatsapa hafanana ianao.
44. Nesoriko tsy ho amin'ny fanahy rehetra. . . (tononina ny anaran'ny nahaterahanao), amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Niala tamin'ny fanahy foko sy ozona rehetra aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
46. ​​Nesoriko tsy ho ela ny fanahy sy ozona rehetra, tamin'ny anaran'i Jesosy.
47. Ny maloto ara-panahy ratsy sy rojo ratsy rehetra, manakana ny fitomboako ara-panahy, ny roah, amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Izaho dia mananatra ny fanahy rehetra amin'ny marenina ara-panahy sy ny fahajambana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
49. Alefako eo amin'ny masoko sy sofiko ny afon'Andriamanitra mba hanalefaka ny setroky ny satana, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy
50. Ianao ny fahitako ara-panahy sy ny sofiko, mahazo fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy.
51. Ry fanahin'ny fisafotofotoana manafaka ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Amin'ny herin'Andriama- nitra, tsy hanafaka ny antsoko aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Molaviko ny toe-tsaina amin'ny rambon'ny rambony; Misafidy ny fanahin'ny lohany aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Manda ny fetran'ny demonia aho amin'ny fivoarako, amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Izaho dia mandà ny, ny fanosotra ny tsy fanatanterahana ny zavatra vita amin'ny asako, amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Ambarako fa voantso avy amin'Andriamanitra aho. Tsy misy hery ratsy manapotika ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Tompo ô, omeo ahy ny hery hiorenako amin'ny fiantsoako, amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Mahazo ny fanosorana aho mijanona ho mahatoky, mahatoky ary tsy miovaova amin'ny fiainako minisitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Tsy ho voatarika ho amin'ny politika aho, ny fifandonana na ny fikomiana amin'ny fiangonana, amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Tompo ô, omeo ahy ny fahendrena manaja ireo mpampianatra sy oloko izay nanofana ahy tamin'ny anaran'i Jesosy.
61. Tompo ô, omeo ahy ny fon'ny Mpanomponao mba hahafahako miaina ny fitahianao isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Mahazo hery aho, hitsangana manana elatra toy voromahery, amin'ny anaran'i Jesosy.
63. Tsy handao ny fiantsoana ahy ny fahavalo, amin'ny anaran'i jesosy.
64. Ny devoly dia tsy hitelina ny anjarako minisitra, amin'ny anaran'i Jesosy.
65. Hery ho an'ny fampandrosoana marobe amin'ny antso, tongava amiko ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Manambara ny ady amin'ny tsy fahalalana ara-panahy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
67. Mamatotra sy mandroaka ny fanahy tsy mety rehetra aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
68. Mahazo ny fanosorana aho mba hahombiazako amin'ny fanompoana, amin'ny anaran'i Jesosy.
69. Tsy ho fahavalon'ny tsy fivadihana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
70. Tsy hangalako ny volan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.
Dada Ray Misaotra anao noho ny namaliako ny vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraNy vavaka amin'ny mamatonalina mba hahatanteraka ny tanjonao
Next lahatsoratraVavaky isan'andro ho an'ny foto-kevitra sy bevohoka
Teboka vavaka hanoherana ny nofy ratsy
Novambra 18, 2020
Teboka vavaka ho an'ireo tsy manampy ary tsy misy antenaina
Teboka vavaka hanoherana ny tsy fahombiazan'ny orinasa
Teboka vavaka ho fanamarinana rehefa diso fiampangana anao